AMISOM Oo sheegtay iney ka cabsi qabto weeraro culus oo uga yimaada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
AMISOM Oo sheegtay iney ka cabsi qabto weeraro culus oo uga yimaada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
On Mar 7, 2018 221 0
Ciidamo katirsan Al-Shabaab oo cagta mariyay Saldhig ciidamada Amisom ku lahaayeen Jannaale-2015
Taliska ciidamada shisheeyaha ee AMISOM ee duulaanka gardarada ah ku jooga Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday iney ka cabsi qabaan weeraro culus oo ay soo qaadaan Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Afhayeenka ciidamada Shisheeye ee AMISOM ninka lagu magacaabo Lieutenant Colonel Wilson Rono oo la hadlay Idaacadda ku hadasha afka Maraykanka ayaa walaac ka muujiyay in ciidamada Mujaahidiinta ay soo qaadana weeraro waaweyn oo lamid ah kii dhawaan ciidamada Burundi ku qabsaday duleedka degmada Balcad, kaas oo lagu dilay 23 askari oo kamid ah ciidamadaas, loogana qabsaday 17 gaari oo noocyada dagaalka ah.
Rono Afhayeenka Ciidamada Shisheeyaha ayaa sheegay in ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay adeegsadaan dagaalka jabhadeynta oo ah dagaal adag, wuxuuna rajo xumo ka muujiyay qorshe ay ku doonayaan iney isugu furaan magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, oo deegaannada u dhexeeya inta badan ay maamusho Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Rono wuxuu dhanka kale shaaciyay tirada ciidamada Burundi looga dilay kamiinkii Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka Balcad, isagoona aad uga been sheegay, waxaana xitaa uu khilaafay tirada dowladda Burundi ay qirtay in looga dilay dagaalkaas.
“Waxaan dagaalkii Jimcihii ku weynay oo nooga dhintay 3 askari, 6 askari oo kamid ahna dhaawacyo ayaa soo gaaray, waxayna hadda joogaan Muqdisho” ayuu yiri Afhayeenka Ciidamada Shisheeyaha Lieutenant Colonel Wilson Rono mar uu la hadlayay Idaacadda Codka Maraykanka.
Dowladda Burundi ayaa maalin kadib weerarka ay la kulmeen ciidamadeeda waxay shaacisay in laga dilay 5 askari, Afhayeenka Amisom-na 2 ayuu dhimay, balse Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo runta looga bartay ayaa shaacisay in dagaalkaas ay ku dishey 23 askari oo Burundi ah.